Iindlela ezili-10 zohlobo lwe-2018 esingafanele sishiye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nokuba kuyilo lwe logo, uyilo lwewebhu, okanye uyilo lwegraphic, imikhwa yokuchwetheza iguquka ngokukhawuleza kangangokuba kuhlala kungenzeki., nkqu nakwabo basebenza kolu shishino. Iyafana nemibala, oomatshini bokuchwetheza banamandla okuvelisa iimvakalelo kwaye banokuthetha lukhulu ngobuntu bebhrendi yakho. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba ukhethe uhlobo lochwethezo oluhambelana kakuhle nobunjani begama lakho, ngakumbi xa kuziwa kwilogo yakho, iwebhusayithi, okanye kwimizobo.
Ngaphambi kokukhetha uhlobo lochwetheza, kubalulekile ukuba wazi ukuba yintoni eqhubekayo ngoku kwishishini lokuchwetheza kwaye ishiywe ngasemva. Olu phononongo okanye irejista inokusinceda ukuba sifumane umthombo ochanekileyo wokufumana umsebenzi olungileyo kunye nolwaneliseko kwicala lomthengi.
Umfanekiso omnye ubalaselisa ukuba loluphi uhlobo lweefonti oluya kuba lolona lubalulekileyo kwi-2018 oza kuyisebenzisa kwiiprojekthi zakho. Sukuyeka ukufunda kwaye ulungele ukuqaphela ukuba uyilo oluyimpumelelo luya kuba yintoni kulo nyaka.
1 Dwelisa le migca ilandelayo
Dwelisa le migca ilandelayo
ISerif iya kulawula. Indibaniselwano neSans serif ka-2017, kodwa ihlaziywa ngakumbi.
URetro ubuya kwakhona. Isitayile njengoko igama laso libonisa, i-retro. Ngendlela ecocekileyo yee-80s. Kwaye kubonakala ngathi umhla we-8 walo nyaka uza kuba nefuthe lokuba babuyele kwakhona kwimikhwa yokuchwetheza. Kungekudala, ngo-2013, zazisetyenziselwa uPhando lwe-Shanghai Jiao Tong Top 200. Okanye ubuncinci ngokufanayo.
Kukhulu kuya kuba ngcono. Amagama amabini kuphela ayichazayo. Mkhulu kwaye uMnyama. Kubonakala ngathi kuninzi. Ngenxa yokuba inkulu kakhulu kwaye ityebile. Kubhetele kakhulu.
Ukusikwa kunye nokugqunywa. Uninzi lweetekisi ezineemvelaphi ezahlukeneyo kunye nezimangalisayo.
Amagqabantshintshi kunye nokukrwela umgca ngaphantsi. U-2018, uyacacisa, iya kuba ngunyaka wokukrwelelwa okanye bathi. Ke ngoku uyazi, ukubuyisa amanqaku aphezulu eyunivesithi.
Iileta ezotywe ngesandla. Ifakiwe kuyilo lwelogo, uhlobo lochwethezo olukhumbuza ukubhala ngesandla, njengoko igama lisitsho.
IiGrandiets ziya kuthatha indawo. Lungiselela umhlaba ogcwele ukukhanya kunye nombala.
Imigca yesiqhelo iya kuvela. Umahluko phakathi kwenkampani kunye nezo zenziwe ekhaya.
Iifonti ezinemibala ziya kuba nguMnyama oMtsha. Ijongeka ngathi yinguqulelo engu-2.0 kaMnu Wonderful, kodwa nge-'bold 'touch egcwalisa uhlobo lwayo.
Ukungafihli kuTypography. Imvelaphi enemibala yokuchwetheza ngokucacileyo.
Ngo-2017 ezinye iifonti ezilishumi ezahlukileyo zaba yimfashini okanye yayiqhelekile, njengoko kucacisiwe emfanekisweni, ezi namhlanje bezingayi kuba zibaluleke kangako kwimeko. Kodwa ayonzakalisi ukuyikhumbula ukuze ungazenzi iimpazamo, okanye ngubani owaziyo, ukutshintsha iindlela kunye nokwenza uphawu olwahlukileyo. Umahluko kulo nyaka ukwamnye kukuba igama kunye nefonti ngokwayo yahlukile. Kulo nyaka uguquko kunye nokuyilwa kwezinto kuye kwafunwa, ngelixa unyaka ophelileyo- nangona kungabalulekanga- iifonti eziqhelekileyo zisetyenzisiwe phakathi kwabayili.
Phakathi kwabo siquka iArial. Eyilwe nguRobin Nicholas kunye noPatricia Saunders ukusuka kwiSiseko seMonotype ukuphendula ukuthandwa kweLinotype's Helvetica typeface. Kwaye yenye yezona ziqhelekileyo esizifumanayo xa sivula nawuphi na umhleli wokubhaliweyo, nangona kunjalo, iyakwazi ukunika umdlalo omninzi.
Umdlalo ulandelwa zezinye ezidumileyo njengeHelvetica, iMyriad Pro, iGeorgia ... Phakathi kwezona zaziwa kakhulu, nangona kukho nabanye abadumileyo. I-DIN, iFutura, iCabin, iGotham, iCorbel kunye neligi ye-gothic. Zonke zizalise u-2017 ngokusetyenziswa kuzo zonke izinto ezinokwenzeka. Njengeentloko zewebhu kunye nokubhaliweyo komzimba 49% yoyilo. Amaphephandaba ayakwandisa oku kunokwenzeka, nangona kancinci kancinci, into nganye ikhupha uhlobo lwayo lokuchwetheza njengoko kunjalo kwiYouTube kwaye nabani na uya kujongana namagama abo.
Xa uthelekisa, ngaba ungomnye wabo babheja ngoguquko kulo nyaka okanye ngokuchaseneyo, ngaba ubheja ngakumbi kumbutho wesintu we-2017? Ngokwigrafu, ngaphezulu kweefonti ezingama-90.000 zikhona, ke uya kuyila ngendlela othanda ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iindlela ezili-10 zohlobo lwe-2018 esingafanele sizishiye ngasemva